तपाईं डिसेम्बरमा गर्भवती भने
गर्भावस्था को शुरुवात को हिसाब जो जाडो को पहिलो महिना, सामान्यतया छिटो क्रिसमस बिदा को अघिबाटै जान्ने काम मा आयोजित छ, त्यसैले मौसमी चिसो, हिउँ drifts, छोटो दिन र लामो रात जस्तै सबै समस्याहरूको सामान्यतया अस्थायी कठिनाइ रूपमा कथित र लगभग unnoticed पारित छन्। त्यसैले एउटा असल मुड खराब मौसम रोशन गर्न सक्षम छ। गर्भावस्था को शुरुवात लागि राम्रो भावनात्मक पृष्ठभूमि धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
तर यस चाडको एक foretaste sensibly सोच्न सक्ने क्षमता असर हुँदैन छ - एक गर्भवती महिला लागि आफूलाई बारेमा मात्र होइन तर पनि आफ्नो आमा गर्नेछ कुराहरू धेरै असर गर्नेछ जो आफ्नो बच्चा, विचार छ। आफूलाई संक्रमण बाट जोगाउन प्रयास गर्न, भीड स्थानहरू परहेज गिर छैन, अरूलाई छोडेर, स्लिप जो पहिलो सहज जाडो जूता हेरविचार गैर-पर्ची grooved outsole संग, छैन टायर उपहार को खोज मा लिनुपर्छ र नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या व्यस्त: सुरक्षा नियम तसर्थ, आमा को लागि immutable रहनुपर्छ ।
अग्रिम प्रारम्भिक गर्भावस्था संक्रमण मा उपयुक्त निवारक mery- लिन जटिलताहरू संग fraught हुन सक्छ सार्स, त्यसैले - hypothermia र, एक परिणाम रूपमा - दुर्भाग्यवश, रूस मा डिसेम्बर मा, विशेष गरी मध्य क्षेत्रमा, यो सम्भव धारिलो तापमान ड्रप र हार्ड frosts पर्याप्त, यसैले छ भ्रूण लागि र आमा को लागि। , भीड ठाउँहरू जाने oxolinic लेप वा बाम Vitaon प्रयोग गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
नयाँ वर्षको लागि अग्रिम तयारी गर्नुहोस्। नजिक ध्यान छुट्टी तालिका मा overeat होइन। स्मरणीय तर लत्तो गतिविधिहरु लाग्छ। बनाउन तपाईंले अग्रिम गेस्ट हाउस कल गर्ने निर्णय भने पक्का तालिका को तयारी मा मदत, वा सबै पाहुनाहरूको बीच खाना पकाउने वितरण।
बाटो, उपहार बारेमा द्वारा। को जाडो epidemiological अवस्था विचार, छैन सबै भन्दा राम्रो सोख - को पाठ्यक्रम, आफ्नो स्थिति मा पसलहरूमा हतार गर्न। त्यसैले, सायद, परिवार प्रस्तुत गर्न कसरी प्रतिबिम्बित र मित्र अन्य योजना चकित? भविष्यमा परिवारको लागि प्रतीक्षा गर्दै छन् कि परिवर्तनहरू बारेमा कुरा गर्न यो नयाँ वर्ष मा छ कि छैन भनेर होइन? हुनत यो एक धेरै विवादास्पद मुद्दा छ।
जब यो त प्रारम्भिक यसको बारेमा कुरा गर्न चाहे उनको गर्भावस्था घोषणा र सबै भन्दा राम्रो छ? शायद राम्रो प्रतीक्षा सम्म पहिलो केही महिना हुनेछ? यो मुद्दा कारण विभिन्न लागि धेरै लिन्छ: कसैले यो छ कि छैन खुलासा विषय धेरै घनिष्ठ घटना हो केही लागि, यो Jinx डर छ, केही किनभने आवास समस्या को नातेदार वा चिन्तित को मिश्रित प्रतिक्रिया मानिसहरू डराउँदैनन्। सामान्य मा, व्यक्तिगत परिस्थिति को विविधता स्थानान्तरण गर्न हस्तान्तरण गरिएको छैन।
स्वाभाविक, कि नातेदार संग सम्बन्ध आधारमा हरेक मानिस जानकारी वा समय दिइएको अवधिमा परिवार आगामी साथै बारेमा जानकारी सहित एक व्यवहार रणनीति, निर्माण गर्छ। म मात्र यहाँ भनेर याद थियो। नयाँ वर्षको - सधैं धेरै न्यानो भावना, सकारात्मक भावना छ जो एक परिवार छुट्टी, यसलाई सधैं जीवन मा एक भबिष्यको आभास सुखद परिवर्तन हो, पहिले नै साँचो आउन र beremennostyu.Tak सम्बन्धित एक सुखद परेशानी को रूप मा लागू गर्न सुरु गरेका छन् जो आनन्दित आशाले को जागा, मा त कुनै पनि मामला मा नयाँ वर्ष - समाचार रिपोर्ट राम्रो कारण। र प्रस्ताव को गर्भावस्था को समाचार कसैले को भाग मा प्रशंसा भन्दा बढी आलोचना गर्नाले छ भने पनि, क्रिसमस मुड बाहिर सबै कुनै न कुनै किनारा चिकना र नयाँ मानिसको आनन्दित आशाले को शुरुवात चिनो।
अब, संभावनाहरु बारेमा। जन्मेका जवान आमा को लागि सबै भन्दा सहज महिना को छ जो सेप्टेम्बर, मा आउँदैन। रातो र पहेंलो पत्ते बीच एक बच्चा हिंड्न र फल र तरकारी शरद ऋतु बाली विविधता र भिटामिन संग आफ्नो आहार समृद्ध र तत्व पहिल्याउन स्तनपान आमा मदत गर्नेछ त राम्रो। गर्मी, प्रसूति बिदा संग coincided सँगै पछिल्लो छुट्टी अप अवसर खुल्छ।
म एक गर्भवती रोल हुन सक्छ? हामी सिक्न!
17 हप्ता गर्भवती: यो समयमा के हुन्छ?
हरेक महिला जान्नुपर्छ काममा प्रसूति अधिकार
Tenerife अक्टोबरमा: समीक्षा। अक्टोबरमा तेनेरिभमा
प्रेमको spells - कुनै आशा बाँकी हुँदा
जैव-चिमनी - यो के हो? Biofireplaces उपकरण, सञ्चालन सुविधाहरू। अपार्टमेन्ट लागि Biofireplaces
Viaduct - विशेष डिजाइन को एक पुल
आलु कसरी फोडा गर्न
मौखिक स्वच्छता। सत्यतथ्य पेशागत स्वास्थ्य पक्षमा बोल्न